I-Infographic: Amathrendi Asafufusa Okumaketha Nge-imeyili ayi-7 ngo-2022 | Martech Zone
I-Infographic: Amathrendi Asafufusa Okumaketha Nge-imeyili ayi-7 ngo-2022
Nakuba ubuchwepheshe be-imeyili bungenabo ubuciko obusha obuningi mayelana nokuklama nokulethwa, amasu okuthengisa nge-imeyili ayathuthuka ngendlela esikudonsa ngayo ukunakwa kwababhalisile bethu, sibanikeze inani, futhi sibaqhubekisele ukwenza ibhizinisi nathi.
I-imeyili Marketing Emerging Trends
Ukuhlaziya kanye nedatha kukhiqizwe ngu I-Omnisend futhi zifaka:
Okuqukethwe Okukhiqizwa Ngabasebenzisi (UGC) - Yize amabhrendi ethanda ukupholisha okuqukethwe kwawo, akuhlali kuhambisana nezethameli eziqondiswe kubo. Kubandakanya ubufakazi, ukubuyekezwa, noma okuthunyelwe kwenkundla yezokuxhumana okwabiwe nababhalisile bakho kunikeza izinga elihle lobuqiniso.
I-Hyper-Segmentation kanye nokwenza kube ngokwakho – Iqoqo elidala kanye nesitayela esishisayo sokuthumela izincwadi zezindaba sekubuse ukumakethwa kwama-imeyili amashumi eminyaka, kodwa ababhalisile baphelelwa yimiyalezo engahambisani nabo. Ukuthumela ohambweni oluzenzakalelayo olwenzelwe umuntu siqu kakhulu futhi oluhlukaniswe izigaba kushayela ukusebenzelana okungcono kakhulu manje.
Ukuxhumana kwe-Omnichannel – Amabhokisi ethu okungenayo agcwele… ngakho amabhrendi engeza imilayezo eqondiswe ngezaziso zeselula, imiyalezo ebhaliwe, ngisho nokubekwa kwezikhangiso okushukumisayo ukuze kushukunyiswe ithemba ngohambo lwazo lwamakhasimende.
I-Augmented Reality / Reality Virtual - Iningi lokusebenzelana kwe-imeyili lenzeka kumadivayisi eselula namuhla. Lokho kunikeza ithuba lokucindezela ababhalisile ukuthi bachofoze ngaphandle komthungo kubuchwepheshe beselula obuthuthukisiwe obuhlanganisa okungokoqobo okungathandwa kwabathelisi esikubona (AR) kanye ne-virtual reality (VR).
Ukuxhumana - Okuhlangenwe nakho kwedijithali kwemukelwa amabhrendi ngenxa yokuthi kuwukuzizwisa okumanzi kakhulu nokwemvelo okusiza izivakashi ukuthi ziziqondise futhi zenze ulwazi lwazo lomsebenzisi lube ngendlela ethandwa nguwe. I-imeyili iyindawo engokwemvelo yokuqala yalokhu kuzizwisa, yethula umbuzo wokuqala othwebula impendulo futhi ihlukanise isinyathelo esilandelayo kokwenziwayo.
Ukusebenza Kwamaselula - Imikhiqizo eminingi kakhulu isaklama i-imeyili yedeskithophu - amathuba ashodayo esikrinini esincane kanye nekhono lokufunda kalula nokusebenzisana nama-imeyili. Ukuthatha isikhathi esengeziwe sokufaka izingxenye zeselula kuphela ze-imeyili yakho elungiselelwe izinkundla ze-imeyili yeselula kubalulekile ekushayeleni ukusebenzelana.
Ukubaluleka Kobumfihlo Bedatha - U-Apple ulahle uhlelo lwayo lwe-iOS 15 lwe-imeyili oluqeda amapulatifomu okuthengisa ama-imeyili ekuthwebuleni umcimbi ovuliwe we-imeyili ngephikseli yokulandelela. Ngokufiphala kokulandelela ikhukhi, abakhangisi kufanele basebenzise ukulandelela umkhankaso okungcono kakhulu kuma-URL ukuze basize ababhalisile ngaphandle kokwephula imithetho noma ukukhathazeka okuyimfihlo ngokweqile.
Nansi i-infographic ephelele eklanywe ithimba le-Red Website Design ethuthukise le-infographic enhle ngokusekelwe kudatha ye-Omnisend: Izitayela Zokumaketha Nge-imeyili Eziyisi-7 Bonke Abanikazi BamaBhizinisi Nabakhangisi Okufanele Bazazi Ngo-2022.
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene naye I-Omnisend futhi ngisebenzisa isixhumanisi sami sokuhambisana kulesi sihloko.
Tags: apple imeyili yokulandelelaUkungathandwa kwabathelisi esikubonaukuziphathaUbumfihlo bedathaokuhlangenwe nakho kwedijithaliimeyilikuqhutshwa umcimbiukwehlukaniswa okuninganainteractiveiOSiOS 15i-imeyili ephathekayonokwenza kahle kweselulaomnichannelomnisendukuzenzelaukwakhiwa kwewebhusayithi ebomvukubangele i-imeyiliokuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisiesingokoqobo virtual
Umhlahlandlela olula wokuheha abaphambili bakho bokuqala bedijithali